[Bilaogera Arabo 14] Bukeni Waruzi avy ao amin’ny Witness · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2019 3:21 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny volana Febroary 2014)
Nandritra ny Fihaonan'ny Bilaogera Arabo (AB14) natao tany Amman, Jordania, izay nokarakaraina niaraka tamin'ny Global Voices dia nihaona tamin'ny olona maro mahaliana izahay izay nanome fampiofanana momba ny media tao amin'ny faritra. Niresaka tamin'ny olona vitsivitsy avy amin-dry zareo izahay mba hihaino mikasika ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ity fihaonana ity sy ny momba ny asany amin'ny fanampiana amin'ny fampidirana ny feo maro samihafa ao amin'ny sehatra nomerika.
Bukeni Waruzi no Lehiben'ny Fandaharan'asa ho an'ny Afrika sy ny Afovoany Atsinanana ao amin'ny Witness, ary tany an-toerana izy mba handray anjara amin'ny Fanohizana ny Fitantarana Nomerika nandritra ny AB14.
Bukeni Waruzi tao amin'ny #ab14 – “Mitaky ny fahafahana ho an'ireo Bilaogera sy Mpanao gazety Arabo any Afovoany Atsinanana aho” Sary nahazoana alalana.
Miresaka momba ny andraikiny ao amin'ny AB14 i Bukeni anatin'ity rakipeo fohy ity ary manome toro-hevitra vitsivitsy ho an'ireo mpiofana momba ny fampitam-baovaon'olon-tsotra miasa amin'io sehatra io.
Azonao arahina ao amin'ny Twitter i Bukeni @bukeniwaruzi